Maqnaanshaha Van Dijk cudur daar malahan "
Jamie Carragher ayaa ku dhaleeceeyay kooxdiisii ​​hore ee Liverpool qaab ciyaareedkooda liita, wuxuuna sheegay inaysan marmarsiin uga dhigan karin Virgil van Dijk.
Tan iyo bilowgii sanadka 2021, Liverpool waxay noqotay koox daciif ah kadib markii laga badiyay afar kulan oo Premier League ah oo xiriir ah.
Iyaga lagama badinin gurigooda lix kulan, afar waa laga badiyay, guuldarrooyin kala soo gaadhay Burnley, Brighton, Manchester City iyo Everton waxayna barbaro la galeen Manchester United iyo West Brom.
Guuldaradii Everton ka soo gaadhay Sabtidii ayaa ahayd guuldaradoodii ugu horaysay ee garoonkooda kaga soo gaadha Everton tan iyo 1999, markii ugu horeysay tan iyo 1923 iyo kooxda Liverpool oo gurigeeda ku guuleysatay afar kulan oo Premier League ah oo isku xigta
Carragher ayaa ka sheegay barnaamijka Sky Sports ee habeenka Isniinta ee kubada cagta in Liverpool ay aheyd inay guuleysato dhamaan kulamadooda marka laga reebo City oo ka badisay mid.
Aad ayaan u dhaleeceeyay Liverpool markii aan ka warbixinayay ciyaartii Evefrton waxayna umuuqatay mid ka careysiineysa taageerayaasha qaar ayuu yiri daaficii hore ee Liverpool.
“Waxaan falanqeynayay kooxdan Liverpool seddex sano oo uu ka hoos ciyaarayay Klopp iyo sida ugu fiican, markaan ka soo muuqdo barnaamijyada sidan oo kale ah, taageerayaasha kale waxay dhahaan waxaan u tiirsanahay Liverpool
Kooxda heysata Premier League, Champions League iyo kooxda ugu fiican adduunka. Ma jirin wax qalad ah oo ku saabsan taas. Laakiin haatan waa ay jirtaa.
“Haddii aan ka xanaaqay taageerayaasha Liverpool, ma doonayo inaan raaligelin ka bixiyo. Waxa ay kooxdani sameysay waa wax cajiib ah, waan jecel nahay, laakiin taasi micnaheedu maahan inaan la dhaliili karin.
Dhibaatooyinka Liverpool, la’aanta daafacyada dhexe, xiddiga khadka dhexe, taas micnaheedu maahan inaysan garaaci karin Everton, Brighton, Burnley iyo West Brom gurigooda.
Ma noqon doonto wax cudurdaar ah. Dhibaato kasta oo aad la kulanto, ka ciyaartoy Liverpool ahaan waxaa laga yaabaa inaadan ku guuleysan lix kulan gurigaaga. Taasi waa wax aan la aqbali karin.
“Waa inay raadiyaan waddo ay ku guuleystaan, ma doonayo inaan u adeegsado Van Dijk marmarsiinyo Liverpool waxay ku bilaabatay Champions League iyadoo toban ciyaaryahan ay ka badiyeen Everton”.
Bruno Fernandes wuxuu u dhigmaa rikoorka Lionel